तिहारमा कति भयो फूलको व्यापार ? - नेपाल समय
तिहारमा कति भयो फूलको व्यापार ?
काठमाडौं-भक्तपुर झौखेलका राजन शाहीलाई यतिबेला बजारमा फूल पुर्‍याउन भ्याइनभ्याइ छ । परीक्षण लागि फूलखेती थालेका उनले अहिले यसलाई व्यवसाय बनाएका छन् । उनका अनुसार फूलखेतीमा थोरै परिश्रम र आर्थिक लगानीबाट पनि राम्रो आम्दानी भएको छ । बजारमा माग ज्यादा रहेकाले आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उनले भने, 'बजारमा एउटा सानो मालाको ५० देखि ६० रुपैयाँ पर्छ । हाम्रीले एउटा माला २० देखि ३० रुपैयाँमा बेच्छौँ ।' आफैंले बजार व्यवस्थापन गर्न सके अझ आम्दानी हुने उनले बताए ।
अर्का पुष्प व्यसायी दिलीप वादे पुष्प व्यवसायबाट वार्षिक सात लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । आफ्ना पितासँग २०३३ सालदेखि पुष्प व्यवसाय थालेका उनले अहिले राजधानीका गोल्फुटार र थलीमा नर्सरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । थोरै लगानीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ । उनले भने, 'तसैंतिहारका बेला उपभोक्ताको मागबमोजिम आपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।'
यस वर्षको तिहारमा २२ लाख रुपैयाँको फूल कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्षले कुमार कसजुका अनुसार करिब १५ लाख रुपैयाँको सयपत्री र ७ लाख रुपैयाँको गोदावरी र मखमली फूल कारोबार हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसमध्ये तीन लाख रुपैयाँ बराबरको सयपत्री भारतबाट आयात गरिन्छ । करिब १२ लाख रुपैयाँको सयपत्री फूल भने स्वदेशी उत्पादनबाटै कारोबार हुने गरेको छ ।
केही वर्षदेखि वार्षिक करिब तीन लाख रुपैयाँको मखमली फूल विदेशतर्फ निर्यात गर्न थालिएको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार मखमली फूल अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडालगायतका नेपाली समुदायको बसोबास रहेका मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ । विगतमा भन्दा यसवर्ष फूल आयातमा १० प्रतिशत कमी हुने देखिएको छ ।
केही वर्षयता नेपालमा प्लास्टिकका फूलको पनि माग बढेको छ । स्वच्छ र प्राकृतिक फूलको विकल्पमा यस प्रकारका फूल उपभोक्ताको रोजाइमा परेको देखिन्छ ।
तिहार र फूल पर्याय
यमपञ्चक अर्थात् तिहार । मुलुकभर हामी यो पर्व उत्साहपूर्वक मनाइरहेका छौँ । तिहार भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा मखमली, सयपत्री र गोदावरीको फूलको सम्झना आइहाल्छ । वरिष्ठ लोकसंस्कृतिविद् तुलसी दिवसका अनुसार मानिसले प्राचीन कालदेखि जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न अवसरमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यस्ता प्रायः अवसर र उत्सवहरुमा देव–पितृ खुसी पार्नका लागि फूल चढाइन्छ । तर तिहारमा प्रयोग गरिने फूलको भने भिन्ने महत्त्व छ । खासगरी भाइटीकामा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली फूलको मालाले दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ । पहाडमा मखमलीलाई सुपारी फूल भनिने लोकसंस्कृतिविद् दिवसले बताए ।